Madaxweynaha Galmudug oo beeniyey eedayn uga timid dowladda Maraykanka. – Radio Daljir
Noofember 23, 2016 10:45 g 0
Cadaado, Nov 24 2016-Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa wax kama jiraan kutilmaamay eedayn musuq-maasuq oo lasheegay in lagu sameeyey doorashada aqalka hoose ee ka socota Cadaado.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in si Cadaalad ah ay u dhaceen Doorashada Xildhibaanada uu Safiirka soo hadal qaaday, isagoo tilmaamay inay doorteen Beelahooda Ergo ka socotay Xildhibaanadaasi.
Dhanka kalena, Madaxweynaha Galmudug ayaa ku tilmaamay warbixinta Safiirka mid aan laga fiirsan oo uu lasoo deg-degay waxuuna xusay inay Galmudug ay mar walba u taagan tahay sidii Bulshadeeda ugu cadaalad samayn lahayd.
DHEGEYSO-RW Cumar Cabdirashiid oo kahadlay xaaladda abaareed ee Soomaaliya.